» फिल्म खेल्दै गायक प्रकाश सपुत
फिल्म खेल्दै गायक प्रकाश सपुत
११ फाल्गुन २०७६, आईतवार १८:०८
मकवानपुर, ११ फागुन । चर्चित गायक प्रकाश सपुत अब नायकका रुपमा पनि चिनिने भएका छन् । बहुचर्चित बोल माया र गलबन्दी बोलको गीतका साथै दोहोरी ब्याटलमा सबैको प्रशंसा पाउन सफल गायक तथा कलाकार प्रकाश सपुतले नेपाली कथानक चलचित्र ‘परदेशी २’ मार्फत नायकका रुपमा डेब्यु गर्न थालेका हुन् । सानैदेखि चलचित्रको नायक बन्ने सपना बोकेका प्रकाशले यसअघि बहुचर्चित गीत ‘बोल माया’ मा आफ्नो सपना तथा लक्ष्यका केही अपुरो भावनाहरु समावेश गरेर म्युजिक भिडियो बनाएका थिए । उक्त गीतले नेपाली सँगीतमा नयाँ रेकर्ड समेत राख्न सफल भएको थियो । ‘बोल माया’ कै प्रिक्वेलका रुपमा ‘गलबन्दी’ बोलको गीत गाएर थप चर्चामा आएका प्रकाशले अभिनय गर्न थालेको यस चलचित्रले पनि चर्चा कमाउने सम्भावना छ । किनभने यो बहुचर्चित नेपाली कथानक चलचित्र ‘परदेशी’ को सिक्वेल हो । यस अघि परदेशीमा गायक तथा नायक प्रशान्त तामाङले अभिनय गरेका थिए । ‘परदेशी २’ मा प्रकाशसँगै नायिका वर्षा सिवाकोटीले मुख्य भूमिका निभाउँदै छन् । चलचित्रलाई परदेशीकै निर्देशक नारायण रायमाझीले निर्देशन गर्दैछन् । फागुन ९ गते चलचित्रको शुभ मुहुर्त पनि गरिएको छ । यस पटक चलचित्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको पिडामा आधारित रहने बताइएको छ । चलचित्रको शुभ मुहुर्त भएसँगै प्रकाशले खुशी हुँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो बच्चैदेखिको सपना पुरा भएको बताएका छन् । हेरौँ भिडियो–
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको सन्देश यस्तो छ–‘र अब मसँग नयाँ सपना छैन, किनकि अधुरो एउटा सपना पनि पुरा भएको छ–चलचित्रमा अभिनय गर्ने । हिरो बन्ने !’ सपना पुरा भएकोमा जति खुशी र उत्साहित छु त्यतिनै डर पनि लागिरहेको छ, कि मेरो करियरको आगामी यात्रा कता र कस्तो हुन्छ भनेर ! तर सांगितिक यात्रा होस् या चलचित्रको यात्रा म मेरो काम ईमान्दारिता, गम्भिरता र मेहनतका साथ गर्नेछु भन्ने आत्मविश्वास पनि छ । तपाईहरुको सल्लाह सुझाव र शुभेच्छा सँधै रहने अपेक्षा सहित आदरणिय नारायण रायमाझी सरको निर्देशनमा बन्ने चलचित्र ‘परदेशी २’ मा मुख्य नायकको रुपमा आवद्ध भएको औपचारिक जानकारी गराउँछु । चलचित्रको आज शुभ–मुहूर्त गरिएको छ । आजकै मितिबाट करिब २ महिना चलचित्रको छायांकन हुने भएकोले यो बिचमा पुर्व निर्धारित विदेशका केही कार्यक्रम बाहेक देश र विदेशका कुनै पनि सांगितिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने पनि जानकारी गराउँछु । बैशाख पछाडि म पुन संगित कर्ममा फर्किने छु । छोटो तर निकै कष्ठकर यात्रा र संघर्ष पछि अन्तत सपना पुरा भएको छ ।
मनैदेखि बधाई र शुभकामना दिनुस् है ।’
प्रकाशले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको यो सन्देशमा धेरै शुभेच्छुकहरुले खुशी व्यक्त गरेका छन् । यस अघि नै आफ्नै गीतको म्यूजिक भिडियोमा समेत अभिनय कलाको तारिफ पाएका प्रकाशले यो चलचित्रको चरित्रलाई पनि पूर्णत न्याय गर्ने प्रवल सम्भावना छ । प्रकाश सपुतको यो चलचित्र सम्भवत २०७७ सालको असोज महिनातिर प्रदर्शनमा आउनेछ । आदरणीय दर्शकविन्द, यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।